Kuthiwani uma ubuhlungu Izehliso?
Ngokuvamile ukusika izinyo ngokuhlakanipha kubabangele izinkinga eziningi - kusukela ubuhlungu obukhulu lapho ikhula aphume izinsini, ukuze displacement amazinyo eziningana. Ukuvuvukala izinyo ngokuhlakanipha (okuyinto kunjalo kaningi kunamanye amazinyo) has a lot of ubuhlungu futhi kungabangela eziningi izifo.
Ukuhlakanipha izinyo ngokuvamile kubonakala kuphakathi ekupheleni usakhula, noma lena yinkathi ephakathi amabili - engamashumi amabili nanhlanu. Ukuphuca ukuhlakanipha amazinyo kungaba ikhanda ngomqondo truest. Futhi kungaba eyodwa nje kabi, ngoba, ngokungafani nokubili amazinyo, izinyo ukukhula isiqondiso nokuhlakanipha kuwumzabalazo ukubikezela. Kwezinye izimo, engazange abe, eliphuma ngaphezu gum, futhi kwezinye - ikhula engela omunye amazinyo, noma ngisho ikhula perpendicular kubo. Ngokuvamile Izehliso ubuhlungu, okungaba imbangela isikhundla yakhe embi, futhi ukuvuvukala. Ngaphezu ikhanda, kungase kubangele ukushisa ngokweqile futhi ubuhlungu esifundeni ahlabayo yayo.
Ukuhlakanipha izinyo kubuhlungu, namanje asisho usike? Kulokhu, xhumana amazinyo. Futhi kungcono ukukwenza ngaphambili, lapho wayesanda beqala ukwanda njengoba ukuphakama izinyo ngokuhlakanipha - kuyinqubo ongaletha eziningi izinkinga, ingasaphathwa yokuthi kubuhlungu ngempela. Lapho izinyo ngokuhlakanipha libuhlungu, kunzima indlela ukusiza abantu. Udokotela wamazinyo ziyonquma yezinkinga kwenzeke ukubukeka izinyo, ngoba isiqondiso olungalungile ekukhuleni kwayo kungase kube nemiphumela ezifana ukufuduka amazinyo eseduze ohlangothini izimbotshana kokubili izinyo ukuhlakanipha noma amazinyo, okuyinto zitholakala eduze kwayo. Kaningi kuyenzeka ukuthi umane akuyona eyanele umlomo kuye. Lokhu kungaba imbangela perikoronarita. Uma isikhala ngenxa yezinyo laso ngokuhlakanipha sishoda, kungashiwo kancane Uvale gum, okungase kuholele ekungasebenzini "hood" of izinyo ngokuhlakanipha. Kulesi 'hood' imvelo ekahle ukukhula microbial uphinde ukwakheka kobovu - eqinisweni cishe akunakwenzeka ukuba uthole endaweni okufunda ngokusebenzisa amazinyo, kungakhathaliseki ukuthi uzama. Ngakho, "itende" - base ukubukeka elikhulu kanye ukusabalala caries.
Uma ukuhlakanipha kwakho izinyo kubuhlungu, musa zikhulisa indawo ethintekayo noma kunjalo. Njengoba wena awazi ukuthi kufanele wenzeni, wena kuzosiza udokotela wamazinyo. Uma uqhubeka silahle Ukuvakashela ke, cishe ukuthi ukuvuvukala Izehliso hit angomakhelwane yayo izicubu - amathambo imihlathi periosteum. Ukwehluleka yalezi kwezicubu kubangela osteomyelitis noma ithumba - izifo okuzoba sibi ukwedlula "elingenacala" yobuhlungu izinyo. Ukuvuvukala kuholela yokuthi izinsini babe ukuvuvukala abalimala ngakho kanzima angomakhelwane yabo amazinyo. Lesi esinye sezizathu esenza kubaluleke kangaka ukuya wamazinyo ngokushesha nje izinyo ngokuhlakanipha waqala ukulimaza. Ngu uqobo, ubuhlungu - kuwuphawu lokuthi lo ukuvuvukala iye yathuthuka njengoba inqubo.
Udokotela wamazinyo, luhlolo temlomo, into yokuqala uyokwenza konke ukususa ukuvuvukala. izenzo Eminye kwenziwe ngokuhambisana emitholampilo isithombe lwamanje. Izindlela yokwelashwa kuzoya kakhulu ngokuthi yikuphi kwabangela inqubo. Ngisho ukususwa, kodwa kuyinto ngesilinganiso kakhulu. Kufanele kuphawulwe nokho, ukuthi noma yikuphi ukwelashwa yokuhlakanipha iziteshi namazinyo kunzima kakhulu - ngoba izinyo izimpande ngokuhlakanipha engonxantathu kakhulu. Cishe, udokotela wakho uzokwenza konke angakwenza ukuze asindise izinyo. Kodwa uma zonke ezinye izindlela zokwelapha lutho, bese kwesokunxele ukwenza ukususwa, usebenzisa izindlela ngokusungula indlela yokubulala izinzwa. Izimpande, sibonga isimo sabo, benzelwe kahle, futhi mhlawumbe kungani udokotela wamazinyo kuyodingeka banethonya ngomzamo omncane kakhulu, izinzwa wendawo kufanele ahlinzeke insensitivity imizwa enjalo. Isibonelo salokhu kungaba, isibonelo, ukubola kwamazinyo. Nokho, kungaba ukuhlakanipha amazinyo enempilo isuswe uma, slot ngenxa yokuntuleka isikhala sigudluke maqondana dentition. Ukususa wamazinyo ubophekile ukuba ukusho ukuthi lizoxhunywa inqubo yokwelapha - ngeke bakwazi adle noma aphuze isikhathi esithile. Ngokuvamile, isikhathi esingekho ngaphansi amahora amabili ngemuva kokususwa ukudla neziphuzo is contraindicated, futhi emini kungeke kudliwe ashisayo noma, Ngakolunye uhlangothi, izitsha ezibandayo, kanye akufanele ugeza ashisayo futhi ukuxubha amazinyo akho (emini).
Isikhathi esingcono kakhulu ukususa kuyinto usakhula, lapho izimpande Izehliso abumane ngakho njengomuntu omdala, bese ithambo elingaphansi nxazonke, akuyona njengoba aminyene futhi eliqinile. Ngamanye amazwi, ukudonsa namazinyo ukuhlakanipha musha ingasaphathwa eziyinkinga kunaleyo umuntu omdala. Kubantu abadala, izimpande izinyo we "bambelela" wethambo emhlathini. Uma sicabangela iqiniso lokuthi ukuze uthole kubo akulula - eqinisweni, ziseZwini ekupheleni le dentition - kuvela ukuthi oyozihlwitha akulula kanjalo.
Orthopantomogram: ukuthi kuyini nokuthi ucwaningo olwenziwa?
Khipha Amazinyo okufakelwa enziwe okuphelele: ngebuhle nebubi
Grilzy on the amazinyo - kuyini? Imihlobiso ngamazinyo - grilzy (isithombe)
Khulisa amazinyo amasha? Abacwaningi bathi kungenzeka
Amazing zobuciko kusukela amamojuli ngezandla zabo
Indlela yokuhlukanisa i disk? Umhlahlandlela womsebenzisi we-PC we-PC
Dolma yamagilebhisi ishiya: iresiphi okwesikhathi sokudla okwehla esiphundu Oriental
UVladimir Nikitin - boxer Russian division flyweight. Biography kanye ipumelelo bemidlalo
Udokotela Vasiliev Igor Alekseevich: biography, izithombe, izindima
Wamabele fibroadenoma: izimpawu, izimbangela, uphethwe, ukuphathwa. Uyini fibroadenoma kwebele?
I eziyivelakancane igazi iqembu - izici ngamunye